Hagaha Khariidadaha Google-ka ee WordPress: Ku dheji Plugin ama La'aanteed | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Hagaha Khariidadaha Google ee WordPress: Ku dheji Plugin ama La'aanteed
Ma waxaad raadinaysaa hab aad ku dhex galiso nuxurka Khariidadaha Google ee WordPress ee boggaaga?
Sida waxyaabo badan oo WordPress ah, waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo aad ku dhejin karto Khariidadaha Google ee goobtaada iyadoo ku xiran nooca khariidadda aad rabto inaad ku darto.
Maqaalkan, waxaan ku bilaabi doonaa inaan ku tuso sida loogu daro Google Maps gudaha WordPress iyada oo aan lahayn plugin. Markaa, waxaanu kugula talinaynaa plugins-yada qaarkood awooddo waxay kaa caawinaysaa inaad Google Maps geliso, iyo sidoo kale qaar ka mid ah faa'iidooyinka ku jira habkaas. Waxaan sidoo kale dhex gelin doonaa sida saxda ah ee loo isticmaalo Google Maps API, kaas oo hadda loo baahan yahay.
Ugu dambeyntii, waxaan ku soo gabagabeyn doonaa qaar ka mid ah tixgelinta waxqabadka ee isticmaalka Khariidadaha Google ee WordPress oo aan wadaagi doonaa qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida loogu ilaaliyo boggaaga WordPress si degdeg ah xitaa haddii aad u baahan tahay inaad ku dhejiso Khariidadaha Google.
Waxaad riixi kartaa hoosta si aad toos ugu booddo qayb gaar ah ama kaliya akhri dhammaan wax walba.
Khariidadaha Google API hadda waa loo baahan yahay
Sida Khariidadaha Google-ka loogu daro WordPress iyadoon plugin
Khariidadaha Google-ka ee WordPress-ka ah oo ku siinaya dabacsanaan badan
Saamaynta waxqabadka Khariidadaha Google iyo talooyin lagu horumariyo waxqabadka
Laga bilaabo Juun 11, 2018, an Furaha API ayaa hadda looga baahan yahay Khariidadaha Google. Haddii aad mar hore ka hirgelisay Khariidadaha Google-ka ee goobtaada oo aanay hadda shaqaynayn, tani waxay noqon kartaa sababta. Ama halkii, waxaa kaa maqan furaha API. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah, 99% idinka mid ah, waa inay weli ahaataa bilaash. Hoos waxaa ah Google Maps API qiimaha.
Qiimaha Google Maps API
Google waxa kale oo ay ku siinaysaa $200 credit oo soo noqnoqota akoonkaaga biilasha bil kasta si aad uga baxdo kharashaadkaaga isticmaalka. Markaa sida aad arki karto ilaa aad dhalinayso kumanaan codsi mooyaane, isticmaalka Khariidadaha Google ee goobtaada waa inaanay waxba kugu kicin.
Maxaa kaloo is beddelay? Waxba, laakiin hadda waxaad u baahan doontaa inaad sameyso waxyaabaha soo socda haddii aad rabto inaad Khariidadaha Google ku isticmaasho WordPress:
Isku qor koontada Google Cloud Platform Console oo habee
Ku dar macluumaadkaaga biilasha, in kasta oo laga yaabo inaan weligaa lagu dalacin.
Ku dar furaha API-ga Khariidadaha Google-ka ee koodhkaaga ku duugan ama habaynta plugin.
Sida loo helo Khariidadaha Google-ka API Furaha
Hoos waxaa ah tillaabooyin ku saabsan sida loo helo Google Maps API furahaaga.
Aad Google Cloud Platform Console Haddii aadan weli akoon lahayn, samee mid, waa bilaash.
Dooro ama samee mashruuc.
Deji akoonkaaga biilasha Inkasta oo ay u baahan doonaan in aad geliso kaarka deynta faylka, waa in aan waligaa lagu dalacin, ilaa aad ka gudubto xadka isticmaalka sare mooyaane.
Waxaa lagu weydiin doonaa inaad doorato hal ama wax ka badan badeecooyin. Tani waxay kuxirantahay nooca khariidadda aad isticmaalayso. Tusaale ahaan, haddii aad ku dhejinayso khariidad goobtaada WordPress iyada oo aan lahayn plugin (sida ku cad tillaabooyinka hoose), markaa waxaad dooran lahayd Khariidadaha Google ee Embed API.
Khariidadaha Google Embed API
Haddii aad isticmaalayso plugin sida Khariidadaha Google-ka Widget (sida ku cad tillaabooyinka hoose), markaa waxaad dooranaysaa Khariidadaha Google ee API.
Haddii aad isticmaalayso plugin ama mawduuca dhinac saddexaad, waa inay haystaan ​​dukumeenti ku saabsan nooca Khariidadaha Google geynta ay isticmaalayaan. Ha werwerin, mar walba waxaad ku dari kartaa noocyo badan oo kuwan hadhow waad beddeli kartaa.
Daar Khariidadaha Google API
Guji "APIs" ka dibna hoosta "Credentials", waxaad arki doontaa furaha API.
Khariidadaha Google API furaha
Haddii aad si fudud u dhexdaadinayso fure kaaga Khariidadaha API wuxuu ku tusi doonaa qoraal cad oo ku jira summada ishaada. Sidaa darteed waa inaad xaddidaa tan, haddii kale, dadku waxay isticmaali karaan furahaaga API-ga boggooda WordPress ama mashaariicda waxayna kor u qaadi karaan isticmaalkaaga.
Si tan loo sameeyo, si fudud u dhagsii magaca furaha API-ga waxayna kuu ogolaan doontaa inaad ku darto xaddidaad. Goobtaada WordPress, si fudud ku darista tixraacaha HTTP waa inay ahaato mid ku filan. Sida https://yourdomain.com/*. Tani waxay u ogolaan doontaa inay kaliya wacdo mareegahaaga.
Xakamaynta muhiimka ah ee Maps API
Sida Khariidadaha Google loogu daro WordPress La'aanteed Plugin
Haddii aad rabto in aad dhejiso khariidad fudud oo aanad u baahnayn hawlo faahfaahsan oo dheeraad ah sida calamadaha goobta gaarka ah ama sharraxaadyo kale, waxaad ku dhejin kartaa Khariidadaha Google-ka adigoon plugin isticmaalaya Khariidadaha Google ee caadiga ah ee aad isticmaasho maalin kasta.
Waa tan sida ay u shaqeyso…
Talaabada 1: Nuqul ka samee Koodhka Khariidadaha Google-ka
Si aad u bilowdo, adeegso mareegaha Khariidadaha Google si aad u abuurto khariidada aad rabto inaad ku dhejiso.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dhejiso calaamadeeyaha goobta, ku fur meeshaas Khariidadaha Google. Ama, haddii aad rabto inaad dhejiso tilmaamaha, fur tilmaamaha Khariidadaha Google.
Markaad haysato khariidad aad rabto inaad ku dhejiso, dhagsii liiska hamburgerka ee geeska bidix ee sare:
Sida loo galo koodhka ku lifaaqan
Liiska alaabta menu, dooro ikhtiyaarka loogu talagalay Wadaag ama khariidada khariidada:
Fur xulashooyinka cufan
Taasi waxay furi doontaa a Share soo booda. Soo-bandhigaas, dhagsii Ku dheji khariidad tab.
Kadib, waxaad dooran kartaa cabbirka aad rabto adigoo isticmaalaya hoos-hoos. Inta badan bogagga WordPress, cabbirka caadiga ah ayaa si fiican u shaqeeya, laakiin waxaad ka dhigi kartaa khariidadda mid weyn ama ka yar haddii loo baahdo.
Markaad taas sameyso, dhagsii Koobi HTML badhanka si aad u nuqul ka sameyso summada ku lifaaqan:
Khariidadaha Google-ka ee summada leh
Waxaad markaas u baahan doontaa inaad ku darto furaha API-ga koodka. Markaa koodkaagu waa inuu u ekaado sidan:
YOUR_API_KEY& cabbirrada la oggol yahay shaashadda buuxda>
Talaabada 2: Kudar Khariidadaha Google-ka Koodhka Ku-xidhan ee Bogga WordPress
Hadda, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ku darto koodka ku dhejisan boggaaga WordPress ee boostada ama bogga aad rabto inaad ku darto khariidadaada.
Haddii aad isticmaalayso tifaftiraha cusub ee WordPress Gutenberg ee lagu sii daayay WordPress 5.0, waxaad taas samayn kartaa adigoo ku daraya a HTML gaar ah xannibo oo ku dheji koodka dhejiska ee block-ka. Ha iloobin inaad ku darto furahaaga API.
Sida loogu daro koodhka ku lifaaqan tifaftiraha block WordPress
Waxaad dib u eegi kartaa sida khariidadaadu u ekaan doonto adigoo gujinaya Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh badhanka ka sarreeya block.
Haddii aad weli isticmaaleyso tifaftiraha caadiga ah ee TinyMCE, waxaad ku dari kartaa summada Google Maps-ka adigoo furaya Text tab oo ku dheji koodka halkaas:
Sida loogu daro koodhka guntanka ah ee WordPress Classic editor
Markaad ku darto koodka, waxaad dib ugu noqon kartaa Visual tab si aad u aragto horudhac toos ah ee khariidadaada.
Waana taas! Waxaad hadda baratay sida loogu daro Khariidadaha Google ee WordPress iyada oo aan lahayn plugin.
Isticmaal Khariidadahayga Google-ka si aad ugu dhejiso Khariidado aad u dhib badan adigoon lahayn Plugin
Haddii aad rabto inaad hesho hal-abuur dheeraad ah marka ay timaado waxyaabo ay ka mid yihiin calaamadeeyayaal badan oo goobo, tilmaamo gaar ah, iwm, waxaad weli samayn kartaa taas adoon u baahnayn plugin leh adeegga Khariidadahayga Google.
Khariidadahaydu waa qalab rasmi ah oo Google ka yimid kaas oo kuu ogolaanaya inaad abuurto oo wadaagto maab kuu gaar ah. Iyada, waxaad ku abuuri kartaa wax la mid ah tusaalaha hoose, oo leh calaamado badan oo caadooyin ah iyo macluumaad caado ah oo soo bandhigaya marka isticmaaluhu gujiyo calaamadeeyaha:
Tusaalaha Khariidadahayga Google
Waa kan sida loo isticmaalo in lagu daro Khariidadaha Google ee caadada u ah WordPress.
Tallaabada 1: Ku samee Khariidaddaada Google Maps-kayga
Si aad u bilowdo, u gudub Khariidadahayga Google oo samee khariidad cusub. Halkaa, waxaad isticmaali kartaa khariidad dhisaha interface si aad u dhisto khariidadaada:
Isku xirka Khariidadahayga Google
In kasta oo aynaan si faahfaahsan u dabooli doonin, interface-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhisto qaar ka mid ah khariidado hal abuur leh. Si aad u eegto qoto dheer, maqaalkan caawinta ee Google wuxuu daboolayaa wax badan oo ka mid ah shaqeynta muhiimka ah.
Talaabada 2: Samee Code Embed
Markaad dhammayso dhisidda khariidaddaada, waxaad u baahan tahay inaad abuurto summada gundhigga ah.
Kahor intaadan helin koodkaas, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad marka hore ka dhigto khariidadaada mid guud. Si taas loo sameeyo, dhagsii Share badhanka. Kadib, dhagsii Change… soo baxay:
Google My Maps Settings
Kadib, dooro On - Dadweynaha shabakada oo guji Save:
Daar Wadaagga Xiriirinta
Markaad taas sameyso, dhagsii liiska hoos u baxa ee u dhow ciwaanka khariidadaada oo dooro Ku dheji goobtayda si loo abuuro koodka gundhigga ah ee dhabta ah:
Soo gal khariidadahayga summada ku duugan
Taasi waxay furi doontaa popup leh koodka, kaas oo ay tahay inaad nuqul ka sameyso. Ha ilaawin inaad ku darto furaha API
Talaabada 3: Kudar Koodhka Cudarada Bogga WordPress
Hadda, waxaad ku dari kartaa koodka guntanka boggaaga WordPress si la mid ah sidaad u samayn lahayd summada gundhigga ah ee aad ka hesho mareegta Khariidadaha Google ee caadiga ah.
Yeroo baay’ee garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa garaa adda addaa ture.
Bedelkeed isticmaal Khariidadaha Google ee WordPress
Marka laga soo tago hababka gacanta ee sare, waxaa sidoo kale jira tiro badan oo Google Maps plugins ah kuwaas oo kaa caawin kara inaad ku dhejiso maabka goobtaada.
Waxaa jira dhowr sababood oo laga yaabo inaad rabto inaad tixgeliso mid ka mid ah plugins-kan hababka gacanta:
Waxay kuu oggolaanayaan inaad abuurto maabyo adag oo leh is-dhexgal fudud.
Wax walba waad samayn kartaa adigoon ka tagin dashboardkaaga WordPress.
Qaarkood waxay ku xidhaan WordPress. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelatid inaad ku xidhid calaamadaha khariidadaha iyo qoraallada WordPress.
Qaarkood waxay kaa caawin karaan inaad u wanaajiso Khariidadaha Google ee waxqabadka (wax badan oo ku saabsan arrintan dambe).
Dhammaan plugins-yadan, waxaad u baahan doontaa inaad soo saarto Google Maps API Key ka hor intaadan bilaabin dhejinta maabka. Tababarkan ayaa ku tusaya sida loo sameeyo taas.
Khariidadaha Google-ka Widget
Khariidadaha Google-ka Widget waa qalab fudud oo Khariidadaha Google ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad dhejiso khariidad addoo isticmaalaya Khariidadaha Google Static API, kaas oo bixiya hab hawl-qabad badan oo saaxiibtinimo leh iyadoo la gelinayo muuqaal taagan halkii uu ka ahaan lahaa khariidad is dhexgal ah (Waxaan wax badan oo arrintan ku saabsan ku sharxi doonaa qaybta xigta).
Waa doorasho weyn haddii aad rabto wax fudud oo fudud. Markaad hawl galiso, waxaad u baahan doontaa inaad qabsato furahaaga Khariidadaha API ee Google oo aad geliso jaangooyada plugin. Waxaad ku dari kartaa Khariidadda Google-ka aagga aaladaha widget-ka ee goobtaada. Kadib, booqdayaashu waxay furi karaan khariidadda nooc ka wayn oo is dhexgal ah oo ku jira sanduuqa iftiinka:
Isku xirka Khariidadaha Google-ka
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa khariidad is dhexgal ah isla markaaba haddii la rabo, nooca Pro-na waxa uu kuu ogolaanayaa in aad maabka ku dhejiso meel kasta oo ka mid ah goobtaada oo leh kood gaaban.
Khariidadaha Google Fudud
Khariidadaha Google fudud waxay kaa caawinayaan inaad abuurto maab gaar ah oo leh calaamado iyo tilmaamo kuu gaar ah.
Markaad ku darto calaamadeeyayaal, waxaad awood u leedahay inaad soo geliyaan summadaada gaarka ah, ku dar qoraal iyo sawirro sharraxaadda calaamadeeyaha, iyo qaar kaloo badan. Waxa kale oo aad xakamayn kartaa sida khariidadaadu u shaqeyso, sida doorashada inaad u ogolaato isticmaalayaashu inay soo dhaweeyaan iyo in kale:
Markaad dhisto khariidadaada, waxaad ku dhejin kartaa adigoo isticmaalaya koodhka gaaban ama PHP.
Intergeo waa doorasho kale oo caan ah oo kuu ogolaanaysa inaad abuurto khariidado adiga kuu gaar ah oo leh calaamado caado ah oo aad gacanta ku hayso shaqada khariidadda.
Markaad rakibto oo aad hawlgeliso plugin-ka, waxaad awoodi doontaa inaad ka dhisto khariidadahaaga isla markaaba dashboardkaaga WordPress:
Kadib, waxaad ku dhejin kartaa meel kasta oo ka mid ah goobtaada adigoo isticmaalaya koodka gaaban.
Gutenberg Block ee Khariidadaha Google-ka ee Cudad
Gutenberg Block ee Khariidadaha Google-ka Embed waa plugin fudud oo ku dara khariidadaha Google ka go'an tifaftiraha cusub ee WordPress Gutenberg.
Qeybtaan, waxaad ku dhejin kartaa cinwaan kasta oo aad sidoo kale dooran kartaa:
Khariidad is dhexgal ah vs khariidad taagan (mar labaad, habka dambe wuxuu caawiyaa waxqabadka)
Kuuma oggolaan doonto inaad abuurto maab kuu gaar ah - laakiin waa ikhtiyaar ku habboon haddii aad isticmaasho tifaftiraha cusub ee block oo kaliya oo aad rabto hab fudud oo aad ku dari karto qaar ka mid ah maabyada fudud.
Khariidadaha Google-ka ayaa hoos u dhigi kara Boggaga WordPress-ha u oggolaan
In kasta oo Khariidadaha Google ay kuu oggolaanayaan inaad ku dhejiso tiro badan oo shaqeynaya goobtaada khariidado is-dhexgal ah, waxaa jira wax-is-dhaafsi shaqo sababtoo ah waxay u baahan tahay inay ku shubto tiro badan oo qoraallo ah si ay u xoojiso dhammaan shaqadaas is-dhexgalka.
Sheeko dheer oo gaaban, ku darida khariidadaha Google ee is-dhexgalka ayaa hoos u dhigi kara goobtaada.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad taas ula dagaalami karto.
Marka hore, haddii aadan u baahnayn dad awood u leh inay si is dhexgal ah u baadho khariidadaada on your website, dariiqa fudud ee wax lagu dedejin karo la'aanteed wax qalab ah oo dhinac saddexaad ah waa in:
Ka qaad sawirka khariidada si aad ugu isticmaasho goobtaada
Ku xidh sawirkaas khariidadda ku taal mareegaha Khariidadaha Google, ama fur sanduuqa laydhka ee soo booda ee leh khariidadda isdhexgalka marka isticmaaluhu gujiyo.
Habkaas, goobtaadu waxay ku shubaysaa sawir caadi ah - maaha dhammaan qoraallada la xidhiidha Khariidadaha Google.
Beddelka ah inaad tan gacanta ku qabato, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa culeyska iframe ee AWEOS Khariidadaha Google ee dhagsi kasta. Pluginkani waxa uu si toos ah u beddelaa khariidadaha Google-ka ee ku duugan sawirka meeleeyaha guud. Kadib, haddii isticmaaluhu uu gujiyo Qaado Khariidadda badhanka, waxay ku shubi doontaa khariidadaha Google oo buuxa:
Sawirka meeleeyaha Khariidadaha Google
Si kastaba ha ahaatee, waxaan garwaaqsanahay in mararka qaarkood habkan taagan uusan gooyn doonin, dad badanina waxay rabaan inay isla markaaba galiyaan khibradda Khariidadaha Google-ka.
Hadday arrintu sidaas tahay, hab kale oo wanaagsan oo lagu dedejin karo Khariidadaha Google waa in la isticmaalo rar caajis ah. Culays caajis ah, goobtaadu waxay sugi doontaa inay ku shubto khariidadaha Google ee ka hooseeya- laablaaban ilaa ay booqdeyaashu bilaabaan inay hoos u rogaan bogga. Taasi waxay ku xajinaysaa waqtiyada xajinta boggaga hore, iyadoo wali kuu ogolaanaysa inaad dhex galiso macluumaadka Khariidadaha Google ee is dhexgal ah.
Waxaan mar hore wax ka qornay sida loo caajiso sawirada iyo fiidiyowyada waana isku fikrad Khariidadaha Google.
Waxaa jira dhowr plugins oo kuu oggolaan doona inaad tan sameyso. Tusaale ahaan, plugin-ka a3 Lazy Load wuxuu kuu ogolaanayaa inaad culaabta caajiska ah ee iframe, oo ay ku jiraan Khariidadaha Google:
Culays caajis ah Khariidadaha Google
Fursadaha kale waa:
Load caajis ah BJ
Load caajis ah oo uu leeyahay WP Rocket
Loader fudud oo caajis ah
Haddii aad rabto inaad ku dhejiso khariidad fudud goobtaada, waxaad ku dari kartaa Khariidadaha Google WordPress adigoon wax plugin ah isticmaalin qaabka koodka ku dhex jira. Ama, waxaad isticmaali kartaa Google My Maps si aad u abuurto khariidad kuu gaar ah oo aad taas ku dhejiso.
Marka laga soo tago hababkaas gacanta, waxaa sidoo kale jira khariidado badan oo Google-ka ah ee WordPress kuwaas oo ku siin kara kontorool badan adiga oo aan kaa dhigin inaad ka tagto dashboardkaaga WordPress.
Si kastaba ha noqotee habka aad doorato, u fiirso saameynta waxqabadka ee isticmaalka Khariidadaha Google. Isku day inaad isticmaasho Khariidadaha Google-ka marka aad lagamamaarmaan u tahay oo tixgeli tabaha sida sawirada meel-haynta ama culayska caajiska ah si loo yareeyo saamaynta taban ee waxqabadka.
Ma qabtaa su'aalo kale oo ku saabsan isticmaalka Khariidadaha Google ee WordPress? Nala socodsii faallooyinka!
10-ka Aala ee SEO ugu Fiican oo aadan ku noolaan karin la'aanteed